प्रधानमन्त्री मोदी चढेको गाडीमाथि आक्रमण, के छ अवस्था ? - jagritikhabar.com
प्रधानमन्त्री मोदी चढेको गाडीमाथि आक्रमण, के छ अवस्था ?
छिमेकी भारतमा अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा पन्जाब सरकारले गम्भीर त्रुटी गरेको भन्दै हंगामा भइरहेको छ। बुधबार पन्जाबमा मोदीको सवारी भइरहेको सडक किसानले बाटो छेकेपछि तनाब उत्पन्न भएको छ।
उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै नगरी दिल्ली फर्किएका थिए। यही विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई भेटेका छन्। उनले कोविन्दलाई पन्जाबमा के भएको थियो,
भन्नेबारे आफैंले जानकारी दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उता पन्जाब सरकारले बिहीबार घटनाबारे अनुसन्धान गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।
द हिन्दुका अनुसार उक्त उच्चस्तरीय समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। यही विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट हालिएको छ। सर्वोच्चले उक्त विषयमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने भएको एनडिटिभीले जनाएको छ।
भएको के थियो? मोदी बुधबार पन्जाब राज्यमा गएका थिए। केही महिनापछि विधान सभा चुनाव हुन लागेको पन्जाबको राष्ट्रिय शहिद मेमोरियल जान लाग्दा उनलाई अवरोध भएको हो।
मोदी बुधबार बिहान बाथिन्डा विमानस्थलमा पुगेका थिए। त्यहाँबाट उनी हेलिकप्टरमा राष्ट्रिय शहिद मेमोरियल जाने कार्यक्रम थियो। मौसम खराब भएपछि हेलिकप्टर उड्न सकेन।
मौसम खुल्ने आशमा मोदी २० मिनेट जति कुरे। तैपनि मौसममा सुधार नभएपछि उनले झन्डै दुई घन्टाको सडक मार्गबाट जाने निर्णय गरे।गन्तब्यमा पुग्न झन्डै ३० किलोमिटर बाँकी रहँदा भने मोदीको सवारी अघि बढ्न सकेन।
मोदी भ्रमणको विरोध गरिरहेका किसानहरूले आन्दोलन गरेर सडक बन्द गरेका थिए। मोदीको सवारी १५-२० मिनेट त्यहाँ रोकियो तर बाटो खुल्ने अवस्था नभएपछि उनी कार्यक्रम रद्द गरेर फर्किए।
भाजपा र कांग्रेस आईका नेताबीच आरोप-प्रत्यारोप: पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य पन्जाबमा आउने फेब्रुअरी र मार्चमा विधान सभाको चुनाव हुँदैछ। उक्त चुनावलाई लक्षित गर्दै मोदी बुधबार पन्जाब गएका हुन्।
मोदी फिर्ता हुनुमा सुरक्षामात्रै कारण थियो कि यसमा राजनीति पनि मिसिएको थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। भारतीय जनता पार्टीले पन्जाब सरकारले गम्भीर षडयन्त्र गरेको बताएको छ।
भाजपाकी नेता स्मृति इरानीले दिल्लीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उक्त षडयन्त्रलाई देशले समर्थन नदिने बताइन्। प्रधानमन्त्रीको ज्यान जोखिममा पारियो र पन्जाब प्रहरी मूकदर्शक बनिरह्योर
इरानीले भनिन्,‘हामीले कंग्रेस पार्टीलाई कति पटक भनेका छौं नफरत मोदीसँग छ भने हिसाब भारतका प्रधानमन्त्रीसँग नलिनुस्।प्रधानमन्त्री रोकिएको ठाउँसम्म प्रदर्शनकारीहरूलाई कसरी आउन दिइयोर ?
भनेर पनि उनले प्रश्न गरिन्। बुधबार साँझै पत्रकार सम्मेलन गर्दै पन्जाबका मुख्यमन्त्री चरणजीत सिंह चन्नीले यो विषयमा राजनीति गर्न नहुने बताएका थिए।उनले प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षामा प्रदेश सरकार कटिवद्ध रहेको,
उल्लेख गर्दै सुरक्षामा कमी भएको भन्ने कुरा साँचो नभएको दाबी गरे। किसानहरूले अहिले पनि प्रदर्शन गरिरहेकाले उनीहरूलाई लाठीचार्ज गरेर आफूले सडकबाट हटाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री चन्नीको भनाइ छ।
एक स्थानीय मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै चन्नीले सुरक्षाका कारण नभई आफ्नो र्‍यालीमा मानिसहरू सहभागी नहुने भएपछि मोदी दिल्ली फर्किएको बताएका छन्।
७० हजार कुर्सी राखिएका थिए। तर ७ सय जना मान्छेमात्रै आएपछि उहाँले आफैं दिल्ली फर्किने निर्णय गर्नुभएको हो, चन्नीले भनेका छन्। आलोचकहरुले भने यो कुरा हावादारी भएको बताएका छन्।